Madaxwayne Ilmada Yaxaaska iyo Indha cadayska kala daa” Qormo xiisa leh. – Xeernews24
Madaxwayne Ilmada Yaxaaska iyo Indha cadayska kala daa” Qormo xiisa leh.
23. März 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
In kaste oo Guud ahaan masiibadii dalka iyo dadka Ogadenia ku Habsatay ay ruux kaste si Toosa iyo si dad ban u saamaysay, hadana madaxwayne Mustaf wuxuu kamid ahaa dhibanayaashii uu sida Gaarka ah u Taabtay xanuunkii Kooxdii TPLF iyo mamulkii Cabdi iley dadkeena dhaxal-siiyeen.
In kaste oo ay Jiraan Qoysas dhan oo ku Rogmaday iyo Qaar Qof iyo Labo kasoo Hadheen, Hadana Halgankii Khadhaadhaa ee uu sida iskii ah isugu xil Qaamay Mustafe dantuu dooniba Haka lahaadee wuxuu kuwaayay Naf iyo Maalba, waxaanu safka Hore kaga Jiraa Tusaalaha iyo Markhaatiga Nool marka laga Hadlayo Aafadii ina wada saamaysay ee aan dad dal iyo duunyo Toona Inoo dhaafin.
Hadaba marka laga Yimaado Waayihii adkaa iyo wixii ina soo maray Mustafe Muxumed Cumar wuxuu Noqday madaxwaynaha deegaanka Somaalida, Ummada deegaanka oo Jabhada ONLF ugu Horaysana si Kal iyo Laab ah ayay usoo dhowaysay, madaxwayne Mustaf wuxuu Kaalin mug leh oo Hal doornimo kagaystay Wada Hadaladii Heshiiska kusoo dhamaaday ee ONLF iyo Itobiya u dhexeeyay, wuxuuna ku mutaystay Kalsooni iyo Taageero buuxda oo dhan kasta leh.
Madaxwayne Mustaf wuxuu Fagaarayaal kala duwan kajeediyay Khudbado dhiiga dhaqaajinaya oo kusalaysan xaqiiqda wixii dalkeena kadhacay, wuxuu marar kala duwan Gocoshada xanuunka badan ceshan waayay Ilmada, wuxuuna balanqaaday inaysan dhici doonin in dadkeena dib laysugu adeegsado, wuxuu balan qaaday inuu madaxdaJabhada si daacadnima ah ula macaamilayo si danta Guud looga wada shaqeeyo.
Wuxuu isagoo ilmanaya balan Qaaday inuu intii Tabartiis ah daryeeli doono Agoonta Jabhada maadaama uu Yahay madaxwaynihii Ummada, wuxuu kubaaqay midnimo Walaalnimo iyo in wixii dhacay layska cafiyo, si dadkeenu Horay ugu socdaan lagana Fogaado wax kaste oo kala Qaybsanaan u keeni kara bulshada kasoo kabanaysa masiibadii wada saamaysay.
Hadaba madaxwayne Mustaf oo ah shakhsi Aqoonyahana sidoo kale ah Waayo Arag Khibiir ku ah wixii dalkeena kadhacay 27-kii sano ee lasoo dhaafay, Og dhibaatada ay xaalad Abuurka, kala Qaybsanaanta iyo is colaysiga siyaasadeed leeyihiin.
Madaxwayne Khudbadihii Wadaniyadu kabuuxday ee aad Oohinta kusoo xidhi Jirtay ma waxay ahaayeen ilmadii Yaxaaska! iyo waxaan Afka Baarkiisa dhaafsiisnayn oo Indha cadayska dib ayaad u dhiganaysay ? mise waxaanaa Ogayn ayaa jira oo malaha meesha duul kalaa xukuma oo Kolba Luuqaday doonaan dadka kula Hadla!?.
Diintu Waa Qawl iyo Ficile mudane madaxwayne ma Qawlkaagii Hore ayaan Qaadanaa mise Ficilkaaga dambe ee Indha cadayska ah ayaan Raacnaa?.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/cagjar.jpg 360 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-23 06:13:192019-03-23 06:13:19Madaxwayne Ilmada Yaxaaska iyo Indha cadayska kala daa” Qormo xiisa leh.
Sawirro: Al-Shabaab oo baahisay muuqaallada saldhiggii ay qabsadeen Kenya oo wada-hadalladii Soomaalia ka quusatay iyo khubaro Shiiinees ah oo la...